Serena Williams na-eme ncheta ọmụmụ nwa ya nwanyị nke abụọ - Ozi
Agba Style Nddị Akpụkpọ Anụ Ezi Ntụziaka Ọrụ & Ego Ntutu Isi Ngwaahịa Olee Otú Iji Na Akụkọ Ga-Ahụ
Serena Williams na-agba nwa nwanyị Olympia’s 2nd ụbọchị ọmụmụ na a Rare Throwback Photo
Serena Williams mere emume ncheta ọmụmụ nwa ya nwanyị nke abụọ na Instagram, ya na nkọwa ya ga-eme ka nne na nna ọ bụla kwuo, Otu.
Na Sọnde, nwa afọ iri na asaa na-egwu egwuregwu tennis na-asọpụrụ nwa ya nwanyị, Alexis Olympia Ohanian Jr. Williams na-ekerịta foto nlọghachi nke onwe ya na-amụ nwa amụrụ ọhụrụ obere oge ọ mụsịrị nwa, ebe di ya, Alexis Ohanian, susuru ya n'egedege ihu ya .
A post nke Serena Williams (@serenawilliams) kesara na Sep 1, 2019 na 5:59 am PDT
akwụkwọ ọchị maka ndị okenye
O kwuru post, Afọ abụọ gara aga abụrụla ihe kachasị m mma.
Nna dị mpako mekwara ememme ụbọchị ọmụmụ nwa ya nwanyị na Instagram. Onye guzobere Reddit, 36, kesara foto site na ụbọchị a mụrụ Olympia-mana oge a, eserese ahụ gosipụtara aka ezinụlọ.
A post nke Alexis Ohanian Sr. na-akọrọ (@alexisohanian) na Sep 1, 2019 na 8:03 am PDT
O dere, sị, Kedu ka o siworo dị afọ abụọ? Cakebọchị achicha obi ụtọ @olympiaohanian. Daalụ maka ịbụ ihe kachasị ihe anyị mebegoro. Ekele dịrị m maka ịkụziri m na nne na nna ọ bụla nọ na US kwesịrị ọnwa ndị mbụ ahụ na nwa amụrụ ha. Abụ m onye isi azụmaahịa ka mma n'ihi ya. #Akwụ ụgwọFamilyLeave.
Ihe ndị a nwere ike iju ụfọdụ ndị egwu anya, ebe ọ bụ na Williams gosipụtara na mbụ na ha anaghị eme ụbọchị ọmụmụ ụbọchị n'ihi okwukwe ha. Dabere na E! Akụkọ , onye na-eme egwuregwu na-akwado akụkọ ahụ n'oge ogbako ogbako afọ gara aga, na-ekwu, Olympia anaghị eme ụbọchị ọmụmụ. Anyị bụ Ndịàmà Jehova, ya mere anyị anaghị eme nke ahụ.
Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na ezinụlọ enweghị ike ịme ememe. Laa azụ n'ọnwa Febụwarị, Williams tụbara obere Olympia otu oriri na ọ justụ carụ na-eme ka ọ bụrụ naanị maka ya. Achọrọ m naanị ịme ihe na-atọ ụtọ n'ihi na anyị anaghị eme ụbọchị ọmụmụ, ọ sịrị.
Oriri ma ọ bụ enweghị oriri, anyị enweghị mgbagha ọ bụ ụbọchị ncheta ncheta.
Njikọ: Ọnye na-bụ Caty McNally? Afọ iri na asaa Tennis Tennis nyere Serena Williams ọsọ maka ego ya na US Open
esi ewepu ntụpọ ngwa ngwa
Categories Agba Style Ngwọta Homelọ Ndị Nweta
eke ụzọ iji belata ntutu ọdịda
dandruff na ntutu daa n'ụlọ ịgba akwụkwọ
ga na-ekiri ihe nkiri ihunanya nke oge niile
otu esi eyi ịchafụ na isi
kacha mma ntochi fim maka ụmụaka
soda na ihu kwa ụbọchị
meghan markle na ndi oru ojoo